DC-G9 Mirrorless DSLM Camera - Panasonic
LUMIX ဒစ်ဂျစ်တယ် မှန်ဘီလူးတစ်ခုပါ မှန်လွတ် ကင်မရာ DC-G9
အမြန်ဆန်ဆုံးသော စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေးမြင့် ပုံရိပ်နှင့် အလိုအလျောက် လည်ပတ်နိုင်ရည် အမြင့်ဆုံး LUMIX သည် ကျစ်လစ်သော ကိုယ်လည်တစ်ခုတည်းတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ပကတိအလား ပြတ်သားတဲ့ 20.3MP အတွေ့အကြုံ
LUMIX မှပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို ထပ်တိုးမြှင့်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ LUMIX G9 ဟာ ပကတိနဲ့မခြားတဲ့ အရည်အသွေးဆီ မြှင့်တင်လိုက်ပါပြီ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ 20.3 မီဂါပစ်ဇယ်ရှိ Digital Live MOS အာရုံခံစနစ်ဟာ Low-pass Filter မပါဘဲနဲ့တောင် ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်မှာမဆို အရမ်းပြတ်သားတဲ့ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးရအောင် ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပြီး Dynamic Range လည်း အရမ်းကျယ်ပါတယ်။
ဒီကင်မရာဟာ အမြန်နှုန်း၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အကြမ်းခံမှုတွေ အားကောင်းပြီး ကိုယ်ထည်ဟာလည်း ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံ ရိုက်နိုင်ဖို့မှာ သဘာဝတရားက မျက်တောင်တစ်ခတ်အချိန်လေးပဲ ပေးထားပေမဲ့ LUMIX G9 ကတော့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဖြစ် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ပေါ့ပါးသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီကင်မရာဟာ သင်အနေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားသင့်တဲ့ ကင်မရာပါပဲ။
Digital Live MOS အာရုံခံစနစ်နဲ့ လှပတဲ့ Venus Engine တို့ ပေါင်းဖက်လိုက်တဲ့အခါ အလွန်ထူးကဲတဲ့ အရောင်အသေးစိတ်တွေနဲ့ သဘာဝ Texture Expression တွေ ပေါက်ဖွားလာပါတော့တယ်။ Multipixel Luminance Generation နဲ့ Intelligent Detail Processing တို့က တောက်ပမှုနဲ့ အရောင်ခြားနားမှုကို ပိုပြီး အားကောင်းလာစေပါတယ်။ Three-Dimensional Colour Control စနစ်က မှောင်မည်းမှုမှ တောက်ပမှုအထိ ကြွယ်ဝတဲ့ အရောင်များနဲ့ စွဲခိုက်စေပြီး၊ Multi Process NR က ISO အာရုံခံနိုင်စွမ်း မြင့်နေတောင်မှ သင့် ပုံရိပ်များကို ပေါ်လွင် လာစေပါမယ်။
တုန်နေတတ်သလား။ ဘယ်ဆက်တင်မှာမဆို မှုန်ဝါးမှုကို ဖျောက်ပစ်ပါမယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်တွေမှာ ကင်မရာကို တည်ငြိမ်စွာကိုင်ထားဖို့ ခက်ခဲတတ်ပေမဲ့ 5-axis Dual I.S. ရှိနေလို့ စိတ်မပူပါနဲ့။ သင့်ကိုကူညီဖို့အတွက် အသိဥာဏ်ရှိ Image Stablizer2ခု လာပါပြီ။ ၎င်းက အလင်းဖွင့်ချိန်ကို 6.5 ဆတိုးပေးတာနဲ့ ညီမျှလို့ သင့်အနေနဲ့ tele-end အပါအဝင်အထိ 6.5-stop ရှတ္တား အမြန်နှုန်းကို နှေးစေလျက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ LUMIX G9 ဟာ အဝေးပုံတွေ ရိုက်ကူးချိန်မှာတောင် ကိုယ်ထည်နဲ့မှန်ဘီလူး နှစ်ခုစလုံးမှာ တုန်ခါမှုကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်**။ ၎င်းက 4K ဗီဒီယို အပါအဝင် ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှု နှစ်ခုစလုံးအတွက် လုပ်ကိုင်ပေးပါတယ်။ 6.5-stop compensation power ပါတဲ့ 5-axis Body I.S. ရဲ့ အံ့မခန်းစွမ်းပကားဟာ*** O.I.S. မပါတဲ့ မှန်ဘီလူးတွေအပါအဝင် အားလုံးမှာ တုန်ခါမှုကို လျော့ချတည့်မတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
* 5-axis Dual I.S.2က တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ မှန်ဘီလူးကို တပ်ဆင်တဲ့အခါ အလုပ်လုပ်တယ်။ မှန်ဘီလူးရဲ့ ဖမ်းဝဲအပ်ဒိတ် ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ** CIPA စံနှုန်းပေါ် အခြေခံထား [H-FS14140 ကို သုံးသောအခါ ဘယ်ညာ/အထက်အောက် - ဆုံချက်အကွာအဝေး f=140mm (35mm film camera equivalent f=280mm)] *** CIPA စံနှုန်းပေါ် အခြေခံထား [H-ES12060 ကို သုံးသောအခါ ဘယ်ညာ/အထက်အောက် - ဆုံချက်အကွာအဝေး f= 60mm (35mm film camera equivalent f= 120mm)]
အံ့သြလောက်အောင် အသေးစိတ်စုံလင်သော 80MP RAW ရိုက်ကူးမှု
Resolution မြင့် မုဒ်ဟာ 80-မီဂါပစ်ဇယ် RAW တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ 20.3-မီဂါပစ်ဇယ် အာရုံခံစနစ်နဲ့ 8 ကြိမ် ရိုက်ကူးပြီး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ဖန်တီးပေးတယ်။ ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဓာတ်ပုံခင်းကျင်းပြသပွဲတွေအတွက် ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုပါတယ်။
4K 60p/50 အရည်အသွေးချောမွေ့သော ဗီဒီယို
LUMIX G9 ဟာ တိကျမှုမြင့်မားပြီး ပိုးသားလိုချောမွေ့ညက်ညောတဲ့ 4K 60p/50p (QFHD 4K: 3840 x 2160 / MP4) ဗီဒီယိုတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းအားဖြင့် ကင်မရာတစ်လုံးရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ရိုက်ကူးမှု စွမ်းဆောင်ချက်ကို နောက်တစ်ဆင့် ထပ်မြှင့်လိုက်ပါပြီ။
ဒါတင်မကသေးဘဲ မြန်နှုန်းမြင့်ဗီဒီယိုစနစ် ပါဝင်တာကြောင့် အရမ်းနှေးတဲ့ရိုက်ကွက်တွေကို 4K နဲ့ (အများဆုံး 60 fps ၊2ဆပိုနှေး*)၊ ဒါမှမဟုတ် Full HD နဲ့ (အများဆုံး 180 fps ၊6ဆပိုနှေး*) ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
* 30p playback
အလွန်တရာမြန်သော Autofocus နှင့် AFC Burst
Panasonic ရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့ DFD (Depth From Defocus) နည်းပညာဟာ အစဉ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေခဲ့ရာကနေ အခုဆိုရင် ပိုပြီးတောင် ကောင်းမွန်သွားပါပြီ။ DFD က LUMIX G9 အတွက် ရုပ်ပုံနှစ်ပုံရဲ့ ဆုံချက် ပြတ်သားမှု နက်ရှိုင်းမှု တန်ဖိုးများကို အံ့ဖွယ် မြန်ဆန်သည့်နှုန်းဖြင့် ယှဉ်ကြည့်လျက် ဆုံချက် မှန်ဘီလူးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို တွက်ချက်ပေးပါတယ်။ AF drive ကို အမြန်ဆုံးဖတ်နှုန်း 480 fps နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက် LUMIX G9 ဟာ AFC အတွက် ကင်မရာလောကရဲ့ အမြန်ဆုံး Autofocus နှုန်း 0.04 စက္ကန့်* နဲ့ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး 20 fps အတွဲလိုက်ရိုက်ခြင်း** (*** AFS အတွက် 60 fps အတွဲလိုက်ရိုက်ခြင်း) ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
* 1-Area AF တွင် LVF120 fps ဆက်တင်ချိန်ထားတဲ့ H-ES12060 (CIPA) ဖြင့် wide-end။ ** နိုဝင်ဘာလ 8 ရက်၊ 2017 ခုနှစ်မှစ၍ မှန်ဘီလူးတစ်လုံးတပ် ဒစ်ဂျစ်တယ် မှန်မဲ့ကင်မရာအတွက်။
6K/4K Burst နဲ့ဆို ရိုက်ချက် ဘယ်တော့မှ မလွတ်နိုင်တော့ပါ
extended burst ဖြင့် ရိုက်ပါ၊ ပြီးနောက် သင် သိမ်းထားလိုသည့် ဖရိန်ကို အတိအကျ ရွေးချယ်ပြီး ထုတ်ယူပါ။ 30 fps ရှိ 6K ဓာတ်ပုံ* မုဒ်ကြောင့် ရိုက်ကွက်ကောင်းတွေကို အံ့သြမင်တက်လောက်တဲ့ High-resolution 18 မီဂါပစ်ဇယ်နှုန်းနဲ့ ရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။ 60 fps ရှိပြီး မြန်နှုန်းအရမ်းမြင့်တဲ့ 4K ဓာတ်ပုံ စနစ်ဟာ သမားရိုးကျကင်မရာတွေ မရိုက်ယူနိုင်တဲ့ ပိုမြန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါ ရုပ်သေရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။ LUMIX G9 က တကယ့်ကိုပဲ့ အခိုက်အတန့်လေးများကို လက်မလွတ်တမ်း ရိုက်ပေးမှာပါ။
* 6K ဓာတ်ပုံ မှာ 6K ပုံမှ စီမံပေးလိုက်တဲ့ 18-megapixel ခန့်ရှိ (ထိရောက်မှု ရှိတဲ့ ခန့်မှန်းခြေ 6000 x 3000 ပစ်ဇယ် အရေအတွက်) 4:3 (သို့) 3:2 ဗီဒီယို ရိုက်ချက်ထဲမှ ရုပ်ငြိမ်ပုံကို ညှပ်ယူတဲ့ ဆက်တိုက် ရိုက်ယူရေး လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုပါ။
အထူးမွမ်းမံထားတဲ့ AF ဆက်တင်တွေကြောင့် အခုဆိုရင် ရိုက်ကွင်းပေါ်မူတည်ပြီး AF directionality ကို ချိန်ညှိနိုင်ပါပြီ။
ဆုံချက် နယ်ပယ် အုပ်စု အရွယ်အစားနဲ့ အနေအထားကို Multi AF / Custom Multi AF အတွက် စိတ်ကြိုက် သတ်မှတ်နိုင်တယ်။
မှန်မဲ့ကင်မရာအတွက် အကြီးဆုံး 0.83x OLED LVF
စူပါ ပြတ်သားမှုမြင့် 3,680k-dot OLED LVF (Live View Finder) က အထူးကောင်းမွန်တဲ့ မြင်နိုင်စွမ်းကို ယူဆောင်ပေးပြီး နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျနေတောင်မှ ဖရိန်ကို စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မှန်မဲ့ကင်မရာအမျိုးအစားအတွက် အမြင့်ဆုံးချဲ့ဆ 0.83x (35mm camera equivalent) ကြောင့် ရုပ်ပုံရဲ့အသေးစိတ်တွေ၊ ဆက်တင်တွေ၊ Icon တွေကို တွေ့မြင်နိုင်တဲ့အပြင် Long eye point အကွာအဝေး 21mm ရှိတာကြောင့် မျက်မှန်တပ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးတစ်ချက်မှာ OLED LVF က သင်၏ ပုံများကို သင်က ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ကွက်တိ ထွက်လာရေးကို အာမခံပေးပါတယ်။
ပိုမိုအဆင့်မြှင့်ထားသော Focus Detect & Selective AF
LUMIX G9 နောက်ကျောရှိ AF/AE လော့ခ်ခလုတ်ရဲ့ အောက်မှာ ဘုလုံးခလုတ်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို အသုံးပြုပြီး Focusing area Overlay မှာ Focus ထားမယ့်အကွက်တွေကို အလိုအလျောက်ချောမွေ့စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
225-Area AF Focus ရှာဧရိယာဟာ 49 ပွိုင့် (သမားရိုးကျ LUMIX G ကင်မရာများ) ကနေ 225 ပွိုင့်အထိ သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ထားတဲ့အတွက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်။
Custom Multi AF Custom Multi AF မုဒ်က သင့်အား ဆုံချက် နယ်ပယ် 225 အတွင်းမှ ဘလောက်များကို အတန်းလိုက် လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့် ပြုပါမယ်။
ရိုက်ကွင်းပေါ်မူတည်ပြီး မြင်ကွင်းရှာဖွေမှု ရဲ့ လွှမ်းခြုံနိုင်မှုကို 0.7x ၊ 0.77x ဒါမှမဟုတ် 0.83x (35mm camera equivalent) သို့ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ V.MODE ခလုတ်နဲ့ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ကြယ်တွေ လင်းလက်နေတဲ့ ညလို မှောင်မည်းနေတဲ့ ရှုခင်းကို ရိုက်ရာတွင် ဒီမုဒ်က အမှောင်နှင့် ကျင့်သားရနေတဲ့ မျက်စိရဲ့ တက်ကြွမှုကို နှိမ့်ချပေးပါတယ်။ LVF နှင့် ကျောဘက် မော်နီတာကို သီးခြားစီ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Focus အနေအထားကို အတည်ပြုရန် ရိုက်ကူးခံအရာကို 3x မှ 10x ကြားအထိ ခေတ္တချဲ့ပေးပါတယ်။
Status LCD ကြီး
Status LCD ပါရှိတာကြောင့် LUMIX ကင်မရာမှာ ဆက်တင်တွေ ပထမဆုံးအကြိမ် ပါလာတာကို မြင်တွေ့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆက်တင်တွေ မကြာခဏပြောင်းပြီး ရိုက်ကူးတာအပြင် မြင်ကွင်းရှာဖွေမှု နဲ့ ကျောကပ်မော်နီတာ သုံးပြီး ဖရိန်ကို လွယ်ကူစွာ ညှိယူနိုင်ပါတယ်။ ကျောကပ်မော်နီတာရဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရနိုင်တဲ့ ညရိုက်ကွက်တွေမှာလည်း အသုံးတည့်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်သောဆက်တင်များ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရန် Fn လီဗာ
စမတ်အော်ပရေးရှင်းတွေကို ဝဲဘက်လက်မနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Fn လီဗာ ပါတဲ့အတွက် ဆက်တင်တွေကို အတိအကျချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ RAW ကနေ JPEG ကို ချက်ချင်းပြောင်းတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကာလာမုဒ်ကနေ တစ်ရောင်မုဒ်ကို ပြောင်းနေတုန်း ရိုက်ကူးတာအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်ပိုင်သုံးဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်တင်တွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်စေပါတယ်။
ဘလူးတုသ် 4.2 & Wi-Fi® 5GHz - သုံးပျော်တဲ့ အဝေးထိန်း ခလုတ်
ဘလူးတုသ် 4.2 (စွမ်းအင် နည်း) က ကင်မရာကို တို့်ထိရန် မလိုဘဲ ရှတ္တာကို နှိပ်ခြင်းနဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှု စနိုင်/ရပ်တန့်နိုင်တယ်။
၎င်းက စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု နည်းလို့ ကင်မရာနှင့် စမတ်ဖုန်းအကြား အချိန်ပြည့် ချိတ်ဆက်ပေးထားနိုင်တယ်။ ရိုက်ကူးပြီးတာနဲ့ ၎င်းက Wi-Fi သို့ အလိုအလျောက် ပြောင်းသွားပြီး၊ သင့် စမတ်ဖုန်းထံသို့ ဒေတာများကို လွှဲပြောင်းပေးတယ်။ Wi-Fi 5GHz (IEEE802.11ac) က လွှဲပြောင်းမှုကို အံ့မခန်း မြန်ဆန်စွာ လုပ်ပေးပါတယ်။ ရှတ္တာနှင့် အခြားဆက်တင်များကို ထိန်းချုပ်ရန် သင်ဟာ် Android / iOS အတွက် Panasonic ရဲ့ LUMIX ဓာတ်ပုံ အက်ပ်ကို အသုံးပြုနိုင်တယ်။
• Wi-Fi CERTIFIED™ လိုဂိုမှာ Wi-Fi Alliance® ရဲ့ လက်မှတ် အမှတ်အသားပါ။
• Bluetooth® စကားလုံး အမှတ်အသားနှင့် လိုဂိုများမှာ Bluetooth SIG, Inc. မှ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မှတ်ပုံတင် ကုန်အမှတ် တံဆိပ်တွေ ဖြစ်ပြီး Panasonic Corporation မှ ယင်းကဲ့သို့ အမှတ်အသားများကို သုံးစွဲမှုမှန်သမျှသည် လိုင်စင်ဖြင့် သုံးစွဲခြင်းဖြစ်တယ်။ အခြား ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး အမည်များကို သက်ဆိုင်သူတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။
ရေစိုခံ/ဖုန်မဝင်/အေးမခဲနိုင်တဲ့ အကြမ်းခံ ဒီဇိုင်း
LUMIX G9 ကို တင့်ကားကဲ့သို့ တည်ဆောက်ထားရာ ကွင်းထဲတွင် အသုံးကြမ်းတောင်မှ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါတယ်။ ချိတ်ဆက်မှု နေရာတိုင်း၊ ဒိုင်ခွက်နှင့် ခလုတ်တိုင်းတွင် ရေနှင့် ဖုန်မဝင်မှာကို အာမခံပေးထားတဲ့ အပြင် -10 ဒီဂရီအထိ အေးမခဲစေရကြောင်း အာမခံပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ် သတ္တုစပ်ဖြင့် ဖရိမ်တစ်ခုလုံးကို လောင်းထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ထည်က ပေါ့ပါးပေမဲ့ ကြာရှည်ခံနိုင်ပြီး သေးငယ်တဲ့ ဆိုက်ဖြစ်တောင် အကြမ်းခံနိုင်ပါတယ်။ ဒီကင်မရာကု သင်သွားလေရာတိုင်း လိုက်ပါနိုင်ပါတယ်။
• Splash Proof ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ဒီကင်မရာအနေနဲ့ ရေငွေ့၊ ရေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေ အနည်းအကျဉ်းလောက် ထိတွေ့ရတာကို အထူးကာကွယ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြတဲ့စကားလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Splash Proof က ဒီကင်မရာကို ရေနှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မိပါက မည်သို့မှ မထိစေရမှာကို အာမခံခြင်းမဟုတ်ပါ။
အချိန်ကြာကြာရိုက်ကူးစေနိုင်မည့် USB အားသွင်းပေါက်
USB အားသွင်းပေါက် ကိုက်ညီမှု အားသွင်းကြိုးတွဲလျက် ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ ဘတ္ထရီပါဝါ ဘယ်လောက်ကျန်သလဲကို စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘဲ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ပေါ်မှာ အာရုံအပြည့်အဝ စိုက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရိုက်ချက်ကောင်းတစ်ခု ရဖို့ စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ရတဲ့ သဘာဝရိုက်ကွက်တွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
SD နှစ်ကဒ်ထည့်အပေါက် ပါသဖြင့် ရိုက်ချက်တွေ တစ်ချက်မျှမလွတ်
LUMIX G9 မှာ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမြင့်မြင့် ရိုက်ကူးဖို့နဲ့ ဖိုင်စီရီတာ မြန်ဆန်ထိရောက်စေဖို့အတွက် SD နှစ်ကဒ်ထည့်အပေါက် ပါရှိပါတယ်။ နှစ်ခု ထည့်နိုင်တဲ့ SD ကဒ်ပေါက်က် လက်ဆင့်ကမ်း၊ အရံသိမ်းဆည်းမှုနှင့် တစ်ပြိုင်နက် မုဒ်များဖြင့် သင့်အား ရိုက်ကူးခွင့် ပေးပါတယ်။ လက်ဆင့်ကမ်း စနစ်က ပြည့်နေတဲ့ ကတ်ကို ကတ်အလွတ်ဖြင့် လဲလှယ်ပေးနိုင်လို့ လက်တွေ့တွင် အဆုံးမရှိ ရိုက်ကူးနေနိုင်မှာပါ။ အရံသိမ်းဆည်းရေး မုဒ်က ကတ်တစ်ခုတွင် ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနေချိန်မှာ စရိုက်ကူးမှုနဲ့ ရပ်တန့်မှုကို အခြားကတ်မှာ သင် ပြုလုပ်နိုင်စေပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက် ရိုက်ကူးမှုက သင့်ရိုက်ကူးမှုကို ကတ်နှစ်ကတ်စလုံးတွင် ပွားလျက်ကူးပေးပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ရှတ္တာ ယူနစ်
ရှတ္တာခလုတ်မှာ ည် ခန့်မှန်းခြေ အကြိမ် 200,000 နှိပ်မှုကို ခံနိုင်ပါတယ်။ အမြန်ရွေ့လျားနေတဲ့ ရိုက်ကွက်တွေကို ရုတ်ချည်းရိုက်ကူးဖို့အတွက် ရှတ္တာအမြန်နှုန်း အများဆုံး 1/8000 အထိ ပေးစွမ်းရုံသာမက Fast Aperture မှန်ဘီလူးတွေနဲ့ဆိုရင် Outdoor ရိုက်ရင်တောင် De-focus ကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ပါတယ်။
* Panasonic LUMIX ကုမ္ပဏီတွင်း စမ်းသပ်မှု။
DMW-BGG9 Battery Grip (သီးခြား ရောင်းတယ်)
ဘက်ထရီ နှစ်လုံးကို သုံးခြင်းဖြင် —့ တစ်လုံးက ကင်မရာထဲတွင်နဲ့ နောက်တစ်လုံးက လက်ကိုင်* ထဲတွင် — DMW-BGG9 က ဘက်ထရီသက်တမ်းကို နှစ်ဆ တိုးစေပြီး ရိုက်ကူးချိန်ကို တိုးချဲ့ပေးပါတယ်။ ထို့အပြင် ဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြင့် ရိုက်ချိန်မှာတောင် လက်ဖြင့် ကိုင်ထားမှုကို ပိုသက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပါတယ်။ LUMIX G9 အတွက် အထူးဖန်တီးထားတဲ့ DMW-BGG9 ဟာ ရေစို/ဖုန်/အေးခံမှုဒဏ်ခံ အသားကြမ်းကြမ်းဒီဇိုင်းမှာ ဘုလုံးခလုတ်လည်း ပါတာကြောင့် ကင်မရာအတွက် အံဝင်ခွင်ကျ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
* DMW-BGG9 ထဲတွင် ဘက်ထရီ အထုပ် မပါဝင်ပါ။ Splash Proof ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သုံးစွဲမှုက ဒီကင်မရာ အနေနဲ့ ရေငွေ့၊ ရေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေ အနည်းအကျဉ်းလောက် ထိတွေ့ရမှုမှ ကာကွယ်ပေးမယ့် အထူး အဆင့်အတန်းကို ဖေါ်ပြရန် အတွက်ပါ။ Splash Proof က ဒီကင်မရာလက်ကိုင်ကို ရေနှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မိပါက မည်သို့မှ မထိစေရမှာကို အာမခံခြင်းမဟုတ်ပါ။
Panasonic ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာများအတွက် "LUMIX CLUB" အကြောင်း အသိပေးချက်